Thinkings from novels | Layma's World
“မ” တလုံး ၊ ဘ၀အရှုံးနှင့် မိန်းမလှများ…….
“ လမင်းကြီးကို မီကြောက်တယ်….လမင်းကြီးက ၀ိုင်းဝိုင်းကြီး…ခြေလက်တွေလဲမပါဘူး…..မီ ကြောက်လိုက်တာ…”
( စာအုပ်မသိမ်းထားမိ…..ဖတ်ခဲ့တာလဲကြာပြီ…စာသားတွေ လွဲနေနိုင်ပါသည်။)
“အကောင်းကို ရှာ၏ ။ အကောင်းကား မရှိတော့….။”
၃။ “မြူ” (“မြူ” – မ၀င့်မြစ်ငယ်)
“မြူသည် လေနှင့်အမှုတ်ခံရတဲ့ ကောင်းကင်မြူတွေလို တစ်စစီလွင့်ပါးခဲ့ပြန်လေပြီ……။”
ဖတ်ဖူးလား…..၊၊ သူတို့ သည် လှကြသည်….၊ တစ်ခုခု ထူးချွန်ကြသည်…..။ သို့ သော် နိဂုံးမလှ….ရှုံးကြရသည်….။ စိတ်ကို အစိုးမရခြင်း…..ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ဟု ထင်ပါသည်…….။
လေးမမှာ မေးခွန်းလေးတစ်ခု ရှိနေပါတယ်…..။ ဒီလို ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ နာမည်ဟာ ဘာလို့မတစ်လုံးတည်းဖြစ်နေရတာပါလိမ့်……..။ ။????????